कार्तिक २६, सुर्खेत । सुर्खेतमा डेंगी संक्रमण बढ्दो क्रममा छ।
विशेषगरी कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगरमा डेंगीका बिरामी धेरै देखिएका छन्। वीरेन्द्रनगरमा रहेका सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा आउने धेरैजसो बिरामीमा डेंगी संक्रमण देखिने गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश अस्पतालका डा. प्रदीप न्यौपानेका अनुसार अस्पतालमा दैनिक २–३ जनासम्म डेंगीका बिरामी भर्ना हुने गरेका छन्। भर्ना गर्नैपर्ने खालका डेंगी संक्रमितहरूलाई मात्र भर्ना गर्दा यो दर देखिएको उनले बताए।
‘सबैलाई भर्ना गरिँदैन, धेरै समस्या भएका डेंगी संक्रमितहरूलाई मात्र भर्ना गर्ने गरेका छौं,’ डा. न्यौपानेले भने, ‘सबैलाई भर्ना गर्ने हो भने त बेड नै पुग्दैन होला, डेंगीको प्रकार हेरेर अवस्था अनुसार कतिपयलाई परामर्शसहित घरमै आराम गर्न पठाइन्छ।’
जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेतको तथ्याङ्क अनुसार यो वर्षको चार महिनामै अघिल्लो वर्षको भन्दा चार गुणा धेरै डेंगीबाट संक्रमित भएका छन्। गत आर्थिक वर्ष सुर्खेतका १३४ जनामा डेंगी देखिएको थियो।
यो वर्ष (मंगलबारसम्म) सुर्खेतका ५०१ जनामा डेंगी संक्रमण देखिएको जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका सूचना अधिकारी उदय बिसीका अनुसार सात जना प्रदेशका अन्य जिल्लाका मानिसमा डेंगी देखिएको छ।
सफा पानीमा बस्ने एडिज प्रजातिको लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेंगीको संक्रमण ग्रामीणभन्दा पनि सहरी क्षेत्रमा धेरै फैलिने गरेको थापाले बताए। ‘डेंगी सार्ने लामखुट्टै सुर्खेतमा धेरैजसो हुने भएकोले डेंगी संक्रमितहरू सुर्खेतका धेरै छन्,’ उनले भने।
उनका अनुसार पछिल्लो महिना असोज र कात्तिकमा डेंगी संक्रमण धेरै देखिएको छ।
प्रकाशित मिति : २०७७ कार्तिक २६ गते बुधवार
सल्यानमा पहिलोपटक कोरोना संक्रमितको मृत्युु
दाङमा कोरोनाका कारण ५९ वर्षीय पुरुषको मृ’त्यु
प्याजको बोक्रा फाल्नु हुन्छ ? तपाईं गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ
नेपालमा वास्तविक कोरोना भाइरस बाट मृ’त्यु संख्या कति ? यसो भन्छन् अधिकारीहरू
कालो चिया खानुका यस्ता छन् फाइदा